You nwere Vidio Peeji nke mbụ? I Kwesịrị? | Martech Zone
M na nso nso a wee gafee State nke Video 2015 akụkọ si Crayon, saịtị na-ekwu banyere ya nwere nchịkọta zuru oke nke atụmatụ ahịa na weebụ. Ihe nyocha nke 50 peeji nke lekwasịrị anya na mmebi zuru ezu nke ụlọ ọrụ na-eji vidiyo, ma ha jiri nyiwe nnabata n'efu dị ka Youtube ma ọ bụ nyiwe ụgwọ dị ka Wistia or Vimeo, na nke ụlọ ọrụ ndị na-akacha eji video.
Ọ bụ ezie na nke ahụ na-atọ ụtọ, akụkụ na-akpali akpali nke akụkọ ahụ bụ ebe ha mebiri ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-erite uru site na iji vidiyo na ebe obibi ha. N'ụzọ dị ịtụnanya, naanị 16% nke weebụsaịtị 50,000 kachasị elu na-egosipụta vidiyo na ibe ha, yabụ ha ka nwere ọtụtụ ohere maka uto.
Ulo oru ise a nwere ike inwe vidiyo na ebe obibi ha bu Software, Marketing, Health, nonprofit na Education. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịnwe vidiyo na ibe ha, naanị ihe dị ka 1 na 5 weebụsaịtị na ọrụ ndị ahụ na-egosipụta vidiyo homepage.
N'ime obere ụlọ ọrụ nwere ike igosi vidiyo na ebe nrụọrụ ha bụ ihe ịtụnanya ole na ole. Naanị 14% nke azụmahịa njem, 8% nke ụlọ oriri na ọ 7ụ andụ na XNUMX% nke weebụsaịtị na-ere ahịa na-egosipụta vidiyo na-apụta ìhè na ebe obibi ha. The Tourism, Food & Beverage, na Retail ọrụ kwesịrị soro n'etiti ndi isi na vidiyo n'ihi ihe ha na ere.
Maka ụlọ ọrụ ndị ahụ, ndị ahịa ha nwere nnukwu ọchịchọ ịhụ ihe ha na-enweta tupu ịme mkpebi ịzụta. Cheedị banyere oge ikpeazụ ị hụrụ nnukwu vidiyo maka ebe ezumike ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. You chọghị ịga ebe ahụ ozugbo? Ọbụna na ụlọ ọrụ anyị, anyị ahụla nkwụghachi siri ike na ntinye ego site na igosipụta a video anyị homepage.
Ebe ọ bụ na anyị emelitere vidiyo nke ụlọ anyị na 12 Stars Media, anyị enweela nkwekọrịta nkwekọrịta 5 ọtụtụ nke anyị mechiri nke ndị ahịa kpọtụrụ vidiyo vidio ahụ dị ka isi ihe na mkpebi ha. - Rocky Walls, CEO nke 12 Kpakpando Media.
Ihe kachasị na akụkọ a bụ na, ebe azụmaahịa na-amalite igosipụta vidiyo na ibe ha - ma na-ahụ nsonaazụ ọma n'ihi ya - a ka nwere ọtụtụ ohere iji were vidiyo karịa karịa ma hụ mmetụta ọ nwere ike inwe ụlọ ọrụ ' akara ala.
Download 2015 State nke Video Video
Tags: pensụlnri & onunun'ụlọ peeji nke videohomepagehomepage vidiyovidio mkpọsanjemahịa vidiyoVimeoamamihe